I-Google Primer: Funda Amakhono Amasha Wokumaketha Amabhizinisi Amasha Nedijithali | Martech Zone
Abanikazi bamabhizinisi nabakhangisi bavame ukukhungatheka uma kuza ukudayiswa kwe-digital. Kukhona umqondo wokuthi ngicindezela abantu ukuba bamukele njengoba becabanga ngokuthengisa nokumaketha online:
Kuzohlala kushintsha njalo - Yonke ipulatifomu idlula ekuguqukeni okukhulu njengamanje - ubuhlakani bokufakelwa, ukufunda ngomshini, ukucubungula ulimi lwemvelo, iqiniso elibonakalayo, iqiniso elixubekile, idatha enkulu, i-blockchain, i-bots, i-Intanethi Yezinto… yeesh. Yize lokho kuzwakala kusabisa, khumbula ukuthi konke lokho kuzuzisa imboni yethu. Ukuphepha kanye nobumfihlo kwabathengi kuzothuthuka, kanjalo neziteshi namasu esingawusebenzisa ukufinyelela kubo lapho befuna imikhiqizo nezinsizakalo zethu.
Ukwamukela kusenesikhathi kunenzuzo - yize kuyingozi kancane, iziteshi ezintsha zokumaketha zedijithali zinikeza ithuba elihle lokuhlwitha izethameli ezingancintiswana nabo. Ingozi, yiqiniso, ukuthi okuphakathi kungavalwa njengoba kwehluleka noma kutholakala. Kodwa-ke, uma ungathinta izithameli zakho ezintsha bese uziqhuba ubuyele kusayithi lakho lapho ungathatha khona i-imeyili noma uzifake emkhankasweni wokukhulisa, uzobona impumelelo ethile.
Yenza okusebenzayo - ungaxolisi ngokungakwazi ukukwenza konke. Akuvamile ukuthi uthole ibhizinisi elisebenzisa zonke izindlela neziteshi. Cishe akunakwenzeka ukuthola ibhizinisi elizazi zonke futhi elizisebenzisa kahle. Uma ushayela imiphumela nge-imeyili, sebenzisa i-imeyili. Uma ushayela imiphumela ngemithombo yezokuxhumana, sebenzisa imithombo yezokuxhumana. Yenza okusebenzayo - bese uhlola bese ufaka amanye ama-mediums njengoba uzenzela futhi wakhe ukusebenza kahle ngaphakathi.
Abantu bangibuza ukuthi ngiqhubeka kanjani… angazi. Ngokushesha nje lapho ngisebenzisa ulwazi futhi ngizifundisa, amapulatifomu amasha avela nsuku zonke. Kungezinye zezizathu zokuthi kungani ngithuthukisa ngokukhululekile abanye abaholi embonini yezobuchwepheshe bokumaketha. Hlanganisa wonke amasayithi ethu ndawonye, ​​futhi usazofunda ingxenyana nje yalokho okwenzekayo embonini yethu.
Lowo ngumbuzo wamarandi ayisigidi nomphakathi wethu. Uqala ngaphi umuntu? Nokho, nasi isincomo esisodwa sakho - I-Google Primer.
Uhlelo lokusebenza lwe-Primer lunikeza izifundo ezisheshayo, ezilinganayo, ezingenazifundo ezihlokweni zebhizinisi nezokumaketha. Yenzelwe abanikazi bamabhizinisi abasebenza isikhathi eside kanye nabachwepheshe abafuna ukuvelela abafuna ukuthola amakhono amasha futhi bahlale bencintisana ezweni lanamuhla eliguqukayo ledijithali. Izifundo zikaPrimer zikhethiwe futhi zakhiwa iqembu elincane kwaGoogle. I-Google isebenzisane nochwepheshe bemboni abaphezulu ukuletha abasebenzisi bethu izihloko zakamuva nezihambisana kakhulu, amathiphu, amasu, nezifundo.
Sesha ku-Primer ngamakhono owafunayo, ulandele inqubekelaphambili yakho njengoba uhamba, futhi uwafunde wonke. Izigaba ezisemqoka zifaka:
Ukuphathwa Kwezinhlaka - Thola izindlela zokwakha ubudlelwano obunempilo bokusebenza nama-ejensi akho.
Ama-Analytics - Thatha izifundo kumamethrikhi edijithali, iGoogle Analytics, nokuningi.
Isakhiwo seBrand - Thola ukuthi ungalikhetha kanjani igama lebhizinisi eliqinile, uthuthukise ubunikazi bomkhiqizo wakho, nokuningi.
Imininingwane yebhizinisi - Yazi izithameli zakho ngezifundo ekuhlolweni komsebenzisi, ocwaningweni nasekuqondeni kwamakhasimende.
Ukuphathwa kwebhizinisi - Thatha izifundo ngobuholi, ibhalansi yempilo yomsebenzi, ukuqasha iqembu, nokuningi.
Ukuhlela Lebhizinisi - Funda ukuthi ungaqala kanjani ibhizinisi ulimise ukuze liphumelele.
Ukukhangisa Okuqukethwe - Thola izifundo ngokuhlela, ukudala, nokwabelana ngokuqukethwe okuphoqelelayo.
Ukuzibandakanya Kwamakhasimende - Funda ukuthi ungayakha kanjani indaba yebhizinisi lakho futhi uthole izithameli zakho oqonde kuzo.
Digital Marketing - Thola ukuthi ungamaketha kanjani ibhizinisi lakho online.
imeyili Marketing - Thola ukuthi ungalwakha kanjani uhlu lwe-imeyili, usebenzise i-imeyili ezishintshayo, ugweme izihlungi zogaxekile, nokuningi.
Ukukhangisa Kwamaselula - Thola amathiphu wokubandakanya izethameli zakho eziqondiwe kumaselula abo.
Okuthengisa - Thatha amanye amathiphu wokwenza ukuthengisa kwakho kokuqala noma ukuthola ukuthengisa okuningi.
Social Media - Funda ukuthi ungazakha kanjani izikhangiso zomphakathi, usebenze nabathonya, nokuningi.
Ukuqalisa - Funda mayelana nokugenca ukukhula, prototyping, crowdfunding, namanye amaqhinga wokuqalisa.
Okuhlangenwe nakho komsebenzisi - Funda ngokusiza abasebenzisi ukuthi bathole okuningi kuwebhusayithi yakho, isitolo seselula, izinhlelo zokusebenza, nokuningi.
Marketing Video - Funda ngokudala amavidiyo asebenzayo ku-inthanethi, izikhangiso zevidiyo ezisebenza kanzima, nokuningi.
Iwebhusayithi - Thola amathiphu wokwenza iwebhusayithi yebhizinisi eheha amakhasimende.
Qalisa namuhla! Noma ngabe umusha ebhizinisini noma kumakethi onolwazi, uhlelo lokusebenza lunikeza izeluleko nesiqondiso esihle.
Landa i-Google Primer
Tags: agencyukuphathwa kwe-ejensiukuqeqeshwa kwe-ejensiAma-Analyticsukuqeqeshwa kwezibaloisakhiwo somkhiqizoimininingwane yebhizinisiukuphathwa kwebhizinisiukuhlela ibhizinisiukuqeqeshwa kwebhizinisiUkukhangisa Okuqukethweukuqeqeshwa kokuqukethwe kokumakethaukuqeqeshwa kokuqukethweukuzibandakanya kwamakhasimendeukuqeqeshwa kokubandakanya amakhasimendeukudayiswa kwe-digitalukuqeqeshwa kokumaketha kwedijithaliImfundoimeyili Marketingukuqeqeshwa kwezentengiso nge-imeyiliyokufundauhlelo lokusebenza lweselulaukumaketha amaselulaukuqeqeshwa kokumaketha okuhambayoUkunika Amandla Ukuthengisaukuqeqeshwa kokuthengisaethengiswa kakhuluSocial Media Marketingukuqeqeshwa kwezokuxhumana kwezokuxhumanaukuqeqeshwa kwezokuxhumanaqalisazokuqalasebenzisa ukuqeqeshwa kokuhlangenwe nakhoisipiliyoni somsebenzisiukukhangisa kwevidiyoukuqeqeshwa kokumaketha ividiyoukuqeqeshwa kwevidiyoiwebhusayithiukuqeqeshwa kokumaketha iwebhusayithi